Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynaha Koonfur Africa oo Lagu Soo Eedeeyay Inuu Ku Legleeyahay Musuqmaasuq.
Madaxwaynaha Koonfur Africa oo Lagu Soo Eedeeyay Inuu Ku Legleeyahay Musuqmaasuq.
Posted by ONA Admin	/ April 30, 2016
Hogaamiyaha Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa qarka u saaran in dib loogu soo oogo eedeymo gaadhaya ku dhawaad 800 oo musuqmaasuq laxidhiidha, kuwaasi oo dacwad oogaha guud ee dalkaasi uu la laabtay sanadkii 2009-kii.
Arrintani ayaa timid kaddib markii maxkamadda sare ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada Pretoria ay sheegtay in go’aankii dacwad oogaha guud ee dalkaasi uu uga laabtay eedeymahaasi ay tahay in dib loo eego maadaama go’aankaasi uusan cagligal ahayn.
Madaxa maxkamadda ayaa sheegay in madaxweyne Zuma ay tahay in uu wajaho eedeymahaasi oo laxidhiidha heshiis dhanka gaashaandhigga ah ooy ku baxday balaayiin doolar. Laanta qaran ee dacwad oogista dalkaasi ayaa haatan ay tahay in ay go’aan ka gaadho in ay dacwaddaasi dib u furayso iyo in kale. Madaxweyne Zuma ayaa bilihii u dambeeyay la kulmayay caqabado badan, iyadoo xubno sarsare oo xisbigiisa katirsan ay ku baaqeen in uu xilka ka dego.
Xisbiga Mucaaradka ah ee Democratic Alliance oo dacwaddan hor keenay maxkamadda, ayaa doonayey in la laalo go’aankii sannadkii 2009-kii ee ahaa in Jacob Zuma lagu waayay musuq maasuqa iyo sharci darro ku macaashka, muddo yar uun ka hor intii uusan noqon madaxweynaha dalka. Sababtana waxa lagu sheegay in xisbiga mucaaradka ahi rumaysanyahay in dano siyaasadeed laga lahaa.
Eedaymaha waxa kamid ahaa heshiis lagu soo iibinayay hub oo lagu eedeeyay in Jacob Zuma iyo ninkii xilka uga horreeyay Thabo Mbeki ay si sharci darro ah u musuqeen. Caddaynta ugu wayn ee dacwaddan loo hayo, ayaa ah cajalado sir ah oo laga duubay telefoonno ay ku wada hadlayeen taliyihii horee sirdoonka Koonfur Africa iyo dacwad ooge sare oo lasheegay in ay qorshaynayeen in aanu Zuma dalka madaxweyne ka noqon.